MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA BOERBOEL - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Boerboel
Duke the Boerboel at 1 sano jir
Koonfur Afrika Boerboel
Koonfur Afrika Mastiff
Boerboel waa eey weyn oo xoog badan oo caqli badan. Waxay sifiican isugu dheelitirantahay horumarka muruqyada oo dhaqdhaqaaq badan. Eygu waa inuu noqdaa mid cajaa'ib leh oo wax soo roga. Eeyaha labka ah waxay umuuqdaan si muuqata lab iyo dhedigna dhedig. Dhammaan xubnaha jidhku waa inay isu ekaadaan. Madaxa waa muuqaalka ugu muhiimsan ee Boerboel, maadaama ay u taagan tahay dabeecaddiisa guud. Waa mid gaaban, ballaadhan, qoto dheer, laba jibbaaran iyo muruqyo leh dhabanno si fiican u buuxsamay. Qaybta indhaha dhexdooda waa in si fiican loo buuxiyo. Madaxa sare waa mid ballaadhan oo fidsan, oo leh muruq horumarineed oo caan ah. Wejigu waa inuu si isku mid ah madaxa ugu milmaa, wuuna la jiri karaa ama la aan karaa maaskarada madow. Joogsiga waa inuu muuqdaa, laakiin ma ahan mid muuqda. Xuubka waa madow oo leh sanka weyn ee sanka oo aad u kala fog. Lafta sanku waa toosan tahay oo waxay la siman tahay dusha sare ee madaxa oo qoto dheer, ballaadhan oo xoogaa taabasho ah xagga hore. Lafta sanku waa inay ahaataa 8-10 cm dheer. Dibnaha sare ee dabacsan, ee jirka leh waa inuu daboolaa bushimaha hoose, laakiin waa inuusan ka hoos gaarin daanka hoose. Daamanku (mandibles) waa xoog badan yihiin, qoto dheer yihiin oo ballaadhan yihiin, wax yarna cidhiidhi ka yihiin xagga hore. Ilkaha waa inay ahaadaan kuwo cad, sifiican u horumarsan, si sax ah udhaxeeya, oo leh tiro dhan 42 ilig iyo maqas qaniinaan. Indhaha ballaadhan, jiifka ah ee loo dhigay waa hadh kasta oo bunni ah, laakiin ka sii mugdi badan markaa jilibka, oo leh baalal fidsan oo si fiican u midabaysan. Dhagaha waa inay ahaadaan cabir dhexdhexaad ah, qaabeeya V oo waa inay u dhigmaan madaxa. Waxay si qumman u sarreeyaan uguna ballaadhan yihiin madaxa. Marka eeygu feejignaadaan, dheguhu waa inay sameystaan ​​khad toosan oo leh madaxa sare. Qoorta ayaa muujineysa murqo muruqsan oo la ogaan karo, waxaana lagu dhejiyaa meel sare oo garabka ah. Qoorta adag, muruqyada waa dherer dhexdhexaad ah oo u dhigma inta kale eeyga. Maqaarka qoorta ayaa dabacsan cunaha hoostiisa wuxuuna noqdaa xidid u dhexeeya lugaha hore. Jidhku waxyar ayuu u yara yaraadaa dhinaca sinta. Jadwalka sare waa inuu toosan yahay. Dhabarku waa toosan yahay, ballaadhan yahay, oo dheellitiran, oo leh muruqyo dhabarka caan ah iyo gadaal gaaban. Kuusku waa ballaadhan yahay oo xoog badan yahay, oo leh muruq horumarineed oo wanaagsan. Xabadku waa muruq, ballaadhan yahay oo xoog badan yahay. Dabada toosan, gaaban waxay ku xiran tahay jirka korkiisa. Lugaha hore waa inay ahaadaan kuwo qumman. Bawdada dambe ayaa waxyar ka yar cagaha hore. Lugaha waaweyn ee sida wanaagsan loo suray waxaa lagu soo koobay cidiyaha qalooca oo madow. Lugaha waa inay si toos ah u tilmaamaan. Dhawaaqyada waa in laga saaraa. Maqaarku waa mid qaro weyn, dabacsan, sifiican u midabaysan oo leh laalaab dhexdhexaad ah oo wejiga marka eeygu feejignaadaan. Koodhka gaaban, cufan, ee jilicsan wuxuu ku yimaadaa kareemo cad, midab cirro leh, madow, bunni casaan leh, bunni iyo dhammaan hooska gogosha.
Boerboel waa mid la isku halleyn karo, adeecsan oo caqli badan, lehna ilaalin adag iyo dareen-ilaaliye-eey. Waa is-hubin iyo cabsi la'aan. Boerboel waa mid aad u ciyaar badan oo kalgacal u leh milkiilaheeda. Madadaalada ay ugu jeceshahay waxay noqon laheyd ciyaar lagu soo qaado kalgacal daqiiqad kasta oo ay la qaadato sayidkeeda. Daamankoodu waa xoog badan yihiin waxayna badanaa soo bandhigaan kubbada ay ku ciyaareyso. Ma aha in laga xumaado, waxay ku ciyaari doontaa uun kubbadda la soo saaray! Waxay yihiin kuwo aad u jilicsan oo ku wanaagsan carruurta ay ogyihiin inay u oggolaanayaan inay ku daba ordaan dhabarkooda sida faras, oo jecel daqiiqad kasta dareenka ay helayaan. Boerboels waxay ku fiicnaan doontaa eeyaha kale, bisadaha iyo xayawaannada kale ee aan xayawaanka ahayn, iyagoo u oggolaanaya shimbiraha inay soo degaan oo ay wax ka cunaan maddiibadda cuntada! Waxay ilaalin doonaan qoyskooda, asxaabtooda iyo hantidooda noloshooda. Marka milkiilayaashooda aysan guriga u oggolaanaynin inay cidna soo gasho guriga, inay iyagu aad u yaqaannaan mooyee. Marka martida la soo dhoweeyo yimaadaan way aqbali doonaan ka dib marka si fiican loo barto. Noocani wuxuu u baahan yahay a milkiilaha xukuma . Awoodda uu mulkiiluhu ku siinayo eeyga waa inay ahaataa mid aad u xoog badan oo eeyga uusan sameyn doonin bool albaabka hore marka la furo. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaadho xaalad hoggaamiye xidhmo . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeeysaa hal khadadka hogaamiyaasha si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran. Haddii qofku uusan fahmin fikraddan 100% oo uu kalsooni ku qabo inay la tacaali karaan nooca noocaas ah ee ilaalada markaa kani maahan eeyga iyaga. Milkiilayaasha saxda ah Boerboel wuxuu sameyn karaa xayawaan la yaab leh.
Dhererka: Ragga 25 - 28 inji (64 - 70 cm) Dumarka 23 - 25.5 inji (59 - 65 cm)
Miisaanka: 154 - 200 rodol (70 - 90 kg)
Xulitaanka xulashada awgeed Boerboel waa nooc caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay.
Boerboel laguma talinayo nolosha guriga. Waa inay, uguyaraan, yeelato daarad weyn oo ood leh oo lagu ordo laguna ciyaaro. Boerboel wuxuu ku noolaan karaa banaanka. Tarankaani waa inaan looga tagin inuu kaligiis ordo maxaa yeelay aad buu u ilaaliyaa mararka qaarna si fiican uguma qaato shisheeyaha.
Boerboel wuxuu heli doonaa jimicsi badan haddii uu leeyahay daarad weyn oo uu ku ordo kuna ciyaaro. Si kastaba ha noqotee waxay u baahan tahay in lagu qaado a socod dheer maalin kasta . Boerboels waxay jecel yihiin inay ciyaaraan waxayna jeclaan lahaayeen ciyaar fiican oo kubbadda ah.
Qiyaastii 10 sano
sawirrada soo-celinta dahabka yar
Ilaa 7 ilaa 10 eey
Boerboel si fudud ayaa loo hagaajiyaa. Cadayasho mar mar ah iyo maydho bille ah iyo qashin waa waxa kaliya ee ay u baahan yihiin. Noocani waa celcelis daadiya.
Horumarinta Boerboel waxaa si sax ah loogu tilmaami karaa inay tahay sheeko guul oo Koonfur Afrika ah runtiina waxay maanta toosh ugu tahay kuwa wax ku darsaday inay horumariyaan taranka. Nadiifintu waxay weli ku jirtaa marxaladda soo koraysa. Wax badan ayaa horey loogu qoray faraca Boerboel laakiin cidina ma sheegi karto si hubaal ah in laga soosaaray hal, laba ama in ka badan oo ey ah. Waxa lagu xaqiijiyay baaritaanka ayaa ah in Jan van Riebeeck uu keenay 'bullenbijter' markuu yimid Cape. Eygan ayaa ahaa nooc ballaaran oo xoog badan kaas oo xusuusiyay mid ka mid ah nooca Mastiff eey ah. Kuwii raacay Van Riebeeck ilaa Cape waxay sidoo kale la yimaadeen eeyaha ugu waaweyn uguna xoogga badan muddo tobanaan sano ah ayaa kii ugu xoogga badnaa uu ka badbaaday waddanka haatan cidlada ah. Markii ay yimaadeen Deganayaasha Ingiriiska 1820 waxay keeneen kuwo kale nooca Bulldog iyo Mastiff eey ah. . 'Boerdogs' (sida loo yaqaan) waxaa ku kala firdhay Voortrekkers inta lagu gudajiray Socdaalkii Weynaa waxayna sii wadeen taranka iyaga. Dhaqan ahaan, ka dib Dagaalkii Anglo Boer ee 1902, eeyahaas waxaa iskutallaab ku yeeshay Ingiriiska lugta dheer ee Bulldog iyo sidoo kale Bull Mastiff dhammaadkii iyo horaantii 1950s. Taariikhda waxaa si gaar ah loogu yaqaanaa beeraleyda Gobolka Waqooyi-Bari ee Xorta ah, Waqooyiga Natal iyo qaybo kamid ah Transvaal.
EBBASA = Elite Boerboel Breeders Association ee Koonfur Afrika Boerboelclub (Nederland)
HBSA = Naadiga Taariikhda Boerboel ee Koonfurta Afrika
RIBC = Ruushka Caalamiga ah ee Boerboel Club Samba Global
SABT = Ururka Boerboel ee Koonfur Afrika
SAMBA Global = Urur caalami ah, oo hadafkiisa koowaad uu yahay inay caawiso ilaalinta & horumarinta Boerboel Koonfur Afrika
USBA = Ururka Boerboel ee Mareykanka
Mia the South African Boerboel oo ah eey yar oo qiyaastii ah 6 toddobaad
Mia the South African Boerboel oo ah eey 6 bilood jir ah
Keano, waa toban bilood jir Boerboel oo ka yimid Cape Town, Koonfur Afrika
Otis, Boerboel Afrikaan ah oo 2 sano jir ah, miisaankiisuna yahay 150 lbs., 'Wuxuu jecel yahay inuu ku nasto caruurta'.
Bolt eeygii Boerboel ee jira 5 toddobaad jir— 'Bolt waa Boerboel saafi ah oo diiran oo qurux badan.'
Lahaanshaha sawirka Desert Sky Boerboels
African Boerboel Bakari 10 bilood iyo 130 rodol
stern bern iyo Jarmalka adhijir isku darka
Bob the Boerboel - Sawir waxaa iska leh Boqorada 'Estrones' Boerboels ee ku taal Botswana, Afrika
Mboys oo ay weheliyaan Bob iyo Destiny-oo ah saddexda saaxiib ee qoyska. U fiirso cabirka cabirka madaxyadooda? Lahaanshaha sawirka Thokwengs 'Boerboels ee Botswana, Afrika
Caqiido eyga Boerboel madow
Eeg tusaalooyin badan oo Boerboel ah
Sawirada Boerboel 1
Sawirada Boerboel 2
Sawirada Boerboel 3
Noocyo Ey Aad U Balaadhan
toy adhiga australia cas merle
ciyaarta bred ingiriis bull terrier
waxa taranka ku jira dibi gaagaaban
waa maxay yorkie iyo chihuahua isku dhafka loo yaqaan
dhamaan eyga buur madow
waa maxay eegno pitbull cagajuglaynta sida